कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि असर देखिनु सकरात्मक : विज्ञ « Janata Samachar
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएपछि असर देखिनु सकरात्मक : विज्ञ
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिलाई विभिन्न असर देखिनु भनेको खोपले काम गरेको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आज आयोजना गरेको कोरोना महामारी र खोपको प्रभावकारिता विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरुले खोप लगाएकालाई टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने लगायतका प्रतिक्रिया भएको बताउँदै यी समस्या सामान्य भएको बताएका हुन् ।
खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीले कोरोनाको दोस्रो डोजको खोप ८ देखि १२ सातापछि लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले कोरोना नियन्त्रणमा अन्य देशको तुलनामा नेपाल सरकार उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले महामारीमा सरकारले केही गरेन भन्नेहरुलाई सोचेको भन्दा धेरै काम गरेर देखाएको बताउनुभयो । फलस्वरुप तोकिएको मितिभन्दा एक महिना पहिला खोप ल्याइएको उहाँको भनाई थियो ।
सरकारले खोप खरिदका लागि बजेट छुट्याइसकेको र आम नागरिकलाई छिट्टै खोप दिने तयारी गरिरहेको रावतको भनाई छ ।
समुदायमा खोप अभियानमा जानुअघि खोपप्रति भएको भ्रमहरु चिर्न आवश्यक रहेको सरुवारोग विशेषज्ञ डा.अनुप बास्तोलाले बताउनुभयो । उहाँले कोरोना भ्याक्सिन लगाए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
खोप लगाइ सके पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाउनु पर्नेमा डा. केदार बरालले जोड दिनुभयो । जबसम्म ७० प्रतिशत नागरिकले खोप लगाउँदैनन् तबसम्म सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन डा. बरालको सुझाव छ ।
थप २,०१४ मा काेराेना पुष्टि, ३,०८२ निकाे हुँदा ५२ काे मृत्यु
कोरोनाबाट निको हुने दर ८८.५ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । हाल ६२ हजार